Mmetụta Ọrịa Na-ebute Ọrịa na Azụmaahịa na E-Azụmaahịa
Tinyere egwu nke ọrịa ahụ, mkpọchi mpaghara emeela ka ndị na-azụ ahịa gbanwee ngwa ahịa n'ịntanetị. Lọ ọrụ ndị a kwadebere ma ọ bụ gbanwere ngwa ngwa na ịre ahịa n'ịntanetị agafeela n'oge ọrịa ahụ na-efe efe. Ma o yighị ka mgbanwe a n'àgwà ga-adọghachi azụ dị ka ụlọ ahịa mkpọsa na-emeghe ọzọ.
Ọ bụrụ n ’ị nwere ụlọ ahịa dị n’ onlinentanet na-ere mba niile, ọ bara uru ịnwe nhọrọ ịkwụ ụgwọ mpaghara maka ndị ahịa gị zuru ụwa ọnụ. Zọ kachasị mma bụ ịkwado ịkwụ ụgwọ gị n'otu ikpo okwu, na-enye usoro ịkwụ ụgwọ maka onye ahịa gị gburugburu ụwa.
Ndị a bụ atụmatụ aghụghọ e-commerce na-ewu ewu na-eso n'afọ ndị na-abịanụ. Nọgide na-emelite na teknụzụ bụ ụzọ kachasị mma iji mee ka azụmaahịa gị n'ịntanetị na-aga n'ihu n'ọdịnihu. Nwere ike ịga n’ihu mgbe niile site na igbo mkpa nke ndị ahịa gị. Jide n'aka na ị nyochaa ndị ọbịa gị ka ị chọpụta otu ị si eme n'ịntanetị. Inwe nzaghachi oge site na ndị ahịa na-enweghị usoro nwere ike inye gị nghọta dị ukwuu banyere ọnọdụ azụmaahịa gị n'ahịa.